000 General Ganthan : Sanjaal Ganthan
Enough of Female Rules? Here are the Male Rules
March 11, 2013 by rumblefish · LeaveaCommentFiled under: 000 General Ganthan MAN RULES
(Source: Floating somewhere around facebook)
WE ALWAYS HEAR ‘THE RULES’ FROM THE FEMALE SIDE NOW HERE ARE THE RULES FROM THE MALE SIDE
How to melt your wife’s heart – Nepali Version
Lyrics – Aim Baral – Nisthuri Le Chhadera Gai Hali
Nepali Upcoming Actress Offered5Million Rupees To Play In Blue Films (Source – Kantipur)
Indian National Anthem Jana Gana Mana Full Lyrics
When is Teej in 2012?
Humor: Top 21 Things Nepali Does After Returning From Abroad
List of 30 Plus Pubs and Night Clubs of Hyderabad With Address – Places for Indian Night Life
Actress Melina Manandhar To Be A Mom
February 28, 2013 by rumblefish · LeaveaCommentFiled under: 000 General Ganthan We saw this article being floated around facebook, so thought of publishing it here for fun loving visitors. This is Nepali version of how to melt your wife’s heart.
श्रीमतीको मन पगाल्ने तरिका:-
कोठाभित्र उनलाई नाच्न आग्रह गर्नूस्, आफूले पनि साथ दिनूस् ।
हावा लागेका वेला उनको मुख र आँखामा कपाल खस्दा सर्याइदिनूस् ।
आफ्ना साथीभाइसित परिचय गराउँदा उनको काँधमा हात राख्न नभुल्नूस् ।
बाटोमा हिँड्दा छेउछाउबाट कुनै उत्ताउलो लुगा लगाएकी सुन्दर युवती भेटिइन् भने उनको हात दह्रोसित अँठ्याउनूस् ।
तपाईं दुःखी भएको वेला उनलाई फोन गर्नूस् ।
उनको आँखाको ढक्कनमा म्वाइँ खानूस् ।
उनको बाल्यकालको तस्बिर देखाउन आग्रह गर्नूस् ।
बाथरुममा बच्चालाई जस्तै शिरदेखि पैतालासम्म नुहाइदिनूस् ।
फोनमा अरूसित कुरा गरिरहेको वेला उनीसित यौनक्रियाकलाप गर्नूस् ।
फोनमा रोएको सुन्नुभयो भने तुरुन्तै नजिक जानूस् र छातीमा टाँस्नूस् ।
आक्कल-झुक्कल उनको वास्तविक नामले बोलाउनूस् ।
उनलाई मन पर्ने पप एल्बम किनेर ल्याइदिनूस् ।
कफी अर्डर गर्दा उनको टेस्टअनुसार गर्नूस् ।
टिभी हेर्दा हेर्दै निदाइन् भने बोकेर बेडरुममा लानूस् र लुगा फुकालिदिनूस् ।
उनलाई इमेल पठाउनूस् जे लेखे पनि हुन्छ ।
प्लेन चढ्नुभन्दा ठीकअगाडि उनलाई फोन गर्नूस् ।
छतमा सुकाएका उनका भित्री लुगा उठाएर ल्याइदिनूस् ।
उनी उदास भएका वेला हँसाउन भरमग्दुर प्रयास गर्नूस् ।
तपाईंलाई मन पर्ने खेल हेर्न रंगशाला लैजानूस् । तर खेलमा भन्दा बढी उनीमाथि ध्यान दिएको अभिनय गर्नूस् ।
उनी इश्र्यालु भएका बखत अँगाल्नूस् । कस्सेर अँगाल्नूस् ।
उनको वक्षस्थलको प्रशंसा गर्नूस् ।
उनी वाथरुमबाट निस्केपछि दुईवटा तौलिया दिनूस् । एउटा कपाल पुछ्नलाई ।
कुराकानीका बीचमा ‘आई लभ यू’ भनिदिनूस् ।
अफिसबाट फर्किंदा चकलेट-सकलेट ल्याइदिनूस् ।
उनले नयाँ लुगा लगाएको वेला झट्टै थाहा पाउनूस् र तारिफ गर्नूस् ।
भित्तामा उभ्याएर माया साट्नूस् ।
तपाईंका सबैभन्दा नजिकका केटीसाथीको अगाडि उनको हातमा चुम्बन गर्नूस् ।
February 2, 2013 by rumblefish · LeaveaCommentFiled under: 000 General Ganthan, Nepal - Sex Prostitution and Social Issues घरवाली नेपालमा बाहरवाली प्रवासमा
-खेमनाथ पौडेल/ यूएई-
गत हप्ता साथीहरु मिलेर अबुधावीबाट अर्को स्थानमा जाने योजना बनायौँ। अलि टाढा भएको हुनाले ट्याक्सीमा जाने योजना भयो। संयोगवस ट्याक्सी ड्राइभर नेपाली नै हुनुहुँदो रहेछ। घर बुटवल रहेछ।
‘ए, नेपाली नै हुनुहुँदो रहेछ हजुरहरु नमस्ते’, उनले भने।
हामीले पनि नमस्ते फर्कायौँ। अनुहारका छालाहरु चाउरी परेका जस्ता देखिन्थे। हेर्दा लगभग चार दशक लाग्थे उनी। तर बोलीमा भने चमक थियो।
गुरुजी घर कहिले जाने? प्रश्न सोध्यौँ। ‘आ, केको घर जानु, सबै कुरा यही सेटिङ्ग भएपछि’ उनको जवाफ।
कुरा बुझिनँ। ‘छोराछोरीहरु क्याम्पस पढ्न थाले। अब घरकी बुढीलाई के हेर्नु, विदेशमा नै ‘बाहरवाली’ भएपछि त के चाहियो?
उनको यो कुराले मलाई कौतुहल जाग्यो। अनि उनको कुरामा कुरा मिलाउँदै अगाडि बढ्यौँ। तपाईँलाई कुन देशकी बाहारवाली चाहियो भन्नु न, रुम तपाईँ मिलाउनुहोस् म बाहरवाली मिलाउँछु- नेपाली, फिलिपिन्स, अन्य देशका। अचम्म लाग्यो।
उनी भन्दै थिए- ‘हेर्नुहोस् हाम्रो पेशा यस्तै छ, कस्ता, कस्ता प्यासेन्जर भेटिन्छ थाहा हुँदैन। कहिले काही त मातेर आउछन् र ट्याक्सीमा चढ्ना साथ सेक्सको कुरा गर्छन्। नेपाली महिलाहरु जानी नजानी, अंग्रेजी र हिन्दीमा कुरा छाँट्छन्।
भर्खरैको घटना सुनाए उनले, “फिलिपिन्सलाई साथी बनाउन अति सजिलो, हाई हेलो गर्दैमा साथी बनिहाल्ने। घरमा तीन छोराछोरीका आमा यहाँ भने कन्या जस्ता देखिन्छन्। कुरा नढाँटी भनेँ- मेरो घरमा छोराछोरी क्याम्पस पढ्न थाले। उसले पनि थपी, ‘मेरो पनि त्यस्तै हो, तर यहाँ त कोही छैनन् नि। तिमी पनि खाली, म पनि खाली। अनि सेटिङ्ग मिलिहाल्यो। तपाईँहरुलाई पनि आवश्यक परे मेरो नम्बर लिनुहोस्। कोठा तपाईँको मैया मेरो।” अचम्म परेँ उनको यो कुराले।
लुलु हाईपर मार्केटमा कार्यरत एक जना मित्र दिउँसोको जागिर पछि बेलुका रुममा नआई अन्तै जाने गरेको लामो समय भयो। एक दिन उनलाई विस्तारै बुझ्दा उनले फिलिपिनो साथी बनाएका रहेछन्। हप्ताको ३ दिन जानै पर्ने तर खर्च गर्नै पर्दैन उसैले सबै सेयर गर्छे। मंगलबार त उसको छुट्टी हुने, रुममा कोही पनि नभएको हुनाले मैले पनि मंगलबार छुट्टी मिलाएर जाने गर्दछु। घरमा छोराछोरी ९, १० पढ्दै छन्। हेर्दा उनको उमेर लाग्थ्यो ३५ काटेको, अनुहार फिलिपिन्सकै जस्तै देखिने कतिपयले पारे पनि भनेर बोलाउने सुनाए।
“के गर्ने हजुर प्रवासमा आएको ८ वर्ष भयो। जवानी कती सुकाएर बस्ने ? वर्षको १ महिना विदा हुन्छ। नेपाल जाँदा त्यतिकै समय बित्छ। प्रवासमा ‘बाहरवाली’ नबनाए त यो जवानी त्यतिकै खेर जाने भयो नि। बाध्यता,” उनले सुनाए।
फेसबुकको माध्यमबाट एक जना चितवनका साथीले काठमाडौँकी रैथाने केटीलाई साथी बनाए। कुरा गर्दै जाँदा उनीहरु एकआपसमा अति नै नजिकिए। घरमा श्रीमती तथा छोरा हुँदाहुँदै पनि उनी ती केटीसँग यति नजिक भए कि कम्पनीबाट १५ दिनको विदा मिलाएर नेपाल गए, तर घरमा हैन, नगरकोटको एक होटलमा। त्यही केटीसँग रात बिताई उनी फर्के। आउँदा क्यामेरामा अश्लील फोटाहरु देखाउँदै भने, यसपालिको जस्तो मज्जा कहिल्यै भएन। तर घरमा थाहा भएन उनी नेपालमा नै बाहरवालीसँग १५ दिन बिताएको।
झापाका भूपू भारतीय सेनाका जम्दार अबुधावी पुलिसमा आएको ३ वर्ष भयो। हेर्दा ३० वर्षे जस्तो देखिने ४० नाघ्नै थालेका रहेछन्। गत हप्ता उनी भौँतारिँदै रुममा अपरिचित तरिकाले आइपुगे। ‘तपाईँ पत्याउनुहुन्न मेरी नातिनी छे’, उनले भने। अचम्म लाग्यो, उनको उमेरले लाग्थ्यो भर्खरै विवाह गरेका हुन्। अचानक उनी नजिकैको अबुधावीको इमिरेट्स प्लाजामा पुगेछन्। नसाले लठ् एक चाइनिजको साथमा रात बिताएछन्। तर बिहान उठ्दा उनको साथमा भएको पर्स, झोला सबै हराएछ। उनले अतालिँदै भने, मेरो कार्डहरु थियो, त्यो पनि हरायो। लाहुरे र ड्राइभरको जिन्दगी यस्तै हुन्छ। उनको भनाई सत्य थियो। घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै पनि उनी यसरी प्रवासमा बाहारवालीसँग हप्तै पिच्छे भौँतारिरहेका थिए। चाइनिजहरु विश्वासिला हुन्छन्, उनीहरुले यस्तो काम गर्दैनन्, उनले शंका गरे- चाइनिज मिलाइदिने बंगालीमाथि।
दुवईमा विगत ३ वर्ष सँगै बस्ने एक जना साथीले एक दिन दुवईको रात्री जीवन हेर्न जाउँ भने। नजिकै रहेको अष्टोरिया होटल, रसियन होटल, योर्क होटल आदीका नजिकै झुम्मझुम्म पुरुष महिलाहरु एक आपसमा कुराकानी गर्दै गरेको देखेँ। विभिन्न देशका ती महिलाहरु प्रायः अरबीहरु र गाडी लिएर आएकालाई आँखा लगाई रहेका थिए। तिनै महिलाहरुले अष्टोरिया होटलमा भन्दा आधा रकम कममा अन्य होटलमा मोलतोल गर्दा रहेछन्। नडराई म एक इन्डोनेसियनलाई मोलतोल गर्न थालेँ। गफैगफमा एक रातको १ सय दिह्राममा कुरा फिक्स भयो। लाग्थ्यो उमेरले ३५ काटेकी जस्तो। के गरौँ, कसो गरौँ भयो, चिट-चिट पसिना आयो। कसरी यो केटीसँग छुटकरा पाउँ भन्ने सोच्न थाले। लाजै नमानी उसले मेरा अंग प्रत्यङ्ग छुन थाली। ओहो? मेरो श्रीमती मेरो दीर्घ जीवनको कामना गर्दै ब्रत बस्ने म भने …… उति नै खेर म त्यहाँबाट बहाना बनाएर निस्कन बाध्य भएँ। आखिर म पनि प्रवासमा नजानिँदो तरिकाले बाहरवालीकै खोजीमा थिएँ।
अबुधावीको एक कम्पनीमा कार्यरत नवलपरासीका युवकको विवाह भएको ६ वर्ष भयो तर उनी विदेश आएको भने ८ वर्ष। वर्षको १ पटक नेपाल फर्कने पनि गर्दछन्। एक दिन उनीसँग भलाकुसारी गर्ने मौका मिल्यो। खालेदिया मलमा किनमेल गर्दा त्यहाँ सफाई गर्ने एक नेपाली महिलासँग उनी ठोक्किन पुगे। करिब १ महिनापछि उनले शुक्रबार पारेर उनलाई अबुधावी बोलाए। हामी कोठामा खाना खाइरहेका थियौँ। उनले ती महिलालाई बोलाए, मलाई थाहा थिएन उनी तिनै महिला थिइन् भनेर। साथीहरुले उनलाई १ घण्टाको लागि रुम छोडिदिए। अचम्म लाग्यो आफ्नो रुम अरु कसैलाई मस्ती गर्नको लागि छोड्नु पर्ने। उनले उनी मात्र होइन, अन्य बाहरवालीहरुसँग यसरी नै मस्ती लुट्दा रहेछन्। विदेशमा मात्र होइन, नेपालमा छुट्टीमा गए पछि पनि श्रीमतीलाई ढाँटेर पोखरासम्म पुग्दा रहेछन् तिनै मैयाहरुसँग।
तनहुँका एक जना साथी साउदी अरब गएको करिब ८ बर्ष भयो। ४ वर्षपछि उनी नेपाल फर्के। घरमा छोरी हलक्कै बढेकी थिइन्। उनलाई घरकी बूढीको त्यति माया लागेन। केही समयपछि उनी फेरि साउदी अरब नै फर्के। पछि उनले झापाकी एक महिलालाई प्रवासमा नै बाहरवाली बनाई सकेका थिए।
यूएईका प्रत्येक पार्कमा जहाँ नेपालीहरु भेटिन्छन्, आजकल ती ठाउँहरुमा जोडी बिनाका नेपालीहरु प्रायः कमै हुन्छन्। हेर्दा विवाहित लाग्ने महिलाहरु पनि खुल्लमखुल्ला अंगालो हालेर गफ छाँट्दै छाडा भइरहेका हुन्छन् जसलाई देख्दा अरु नेपालीहरुलाई अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ। गत हप्ता यस्तै कृयाकलापका कारण दुबई पुलीसले त्यस्ता जोडीहरुलाई बढी कडाईका साथ निगरानी राख्न थालेको खुल्न आएको छ।
अहिले प्रवासिएका प्रायः नेपालीहरु बाहरवालीको खोजीमा बढी तल्लिन रहन्छन्। वर्ष दिनमा विदामा जानु पर्ने भएतापनि बाहरवालीले मन बुझाएपछि घर फर्कन पनि कतिपयले क्यान्सिल गरेको पनि देखिएको छ। घरवाली वर्षौदिनसम्म श्रीमानको प्रतीक्षामा रहेतापनि श्रीमान् भने बाहरवालीको चक्करमा घरवालीलाई मर्लक्कै भुलेका कतिपय घट्नाले दर्शाउँछ। श्रीमानले विदेशमा बाहरवालीको सहायता लिएजस्तै श्रीमतीले पनि नेपालमा बाहरवालाको सहायता लिए भने कुनै नौलो घट्ना भने लाग्ने छैन हाम्रो समाजमा। महिनाभरीको तलब यसरी बाहरवालीलाई खर्च गरेमा घरवालीले कसरी धान्ने घर?
Pooja Lama – Another Nepali Actress In Sex Scandal Video Release - 364,060 viewsFree Online E Book Collections Of Paulo Coelho – Read /Download - 89,631 views100 Plus Best Mehendi Henna Design Pictures For Wedding or As A Temporary Tattoo - 58,183 viewsNepali MP3s - 32,149 viewsNamrata Shrestha – The Nepali Actress In Scandal - 29,558 viewsNepali Movie – Sano Sansar – Watch Online [Full Length] - 27,631 viewsGuitar Tabs - 25,180 viewsLyrics – COD Band – Behoshi - 18,685 viewsNepali Joke 19 – Nepali Girlfriend Wears Moms Mini Skirt - 17,831 viewsNepali Joke 20 – Alchhi Nepali Haru - 17,815 viewsLyrics – Aastha – Antim Maya - 16,911 viewsNepali Remix - 16,527 viewsBar Girls of Kathmandu – By Sudeshna Sarkar - 15,715 viewsWhat is seen at “Sex Dance Bar” in Kathmandu - 15,400 viewsCommunity Problem – Teenaged Girls Strip Every Night At Kathmandu Dance Bars - 15,246 viewsHistorical Pictures Of Nepal  - 13,159 viewsSome Nepali Actress Pictures - 13,120 viewsList of Nepali Surnames (C-J) - 12,912 viewsVijaya Dashami (Dashain) and Deepawali (Tihar) Ecards For Free - 11,987 viewsList Of Nepali Surnames (S-Z) - 10,908 views